युरोपमा नयाँ प्रविधिहरूको लागि बजारमा लगानी अर्थव्यवस्था वित्त
यूरोपमा नयाँ प्रविधिहरूको लागि बजारमा लगानी गर्नुहोस्
जोस रीसियो | | बोल्सा
नयाँ टेक्नोलोजी क्षेत्र एक सबैभन्दा नवीन प्रस्तावहरू हो जुन तपाईंसँग यस समयमा तपाईंको बचतहरू लगानी गर्नको लागि हो। यदि तपाइँ के चाहानुहुन्छ यूरोपियन महादेश छोड्ने छैन भने, तपाइँसँग सुरुमा सोचेको भन्दा पनि धेरै विकल्पहरू छन्। हामी तपाईंलाई जानकारीको जानकारी प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछौं जुन तपाईंलाई पैसाको संसारमा यो इच्छा पूरा गर्न जानुपर्ने वित्तीय बजारहरू हुन्।
नयाँ टेक्नोलोजीहरू तुलनात्मक रूपमा हालसालै सिर्जना गरिएको क्षेत्र हो जुन कम्पनीले उनीहरूको स्टक बजार सूचकांकमा समूहीकृत गर्नका लागि यी लाइनहरू व्यवसाय प्रस्तुत गर्दछ। स्पष्ट शक्ति को यो व्यापार गतिविधि को लागी समर्पित छन् कि सबै देशहरूबाट कम्पनीहरूको शक्ति दिईयो। थप रूपमा, यो साना र मध्यम लगानीकर्ताहरूको लागि अधिक प्रभावकारी तरिका हो, तपाईंको केसको रूपमा हेर्नुको लागि बेंचमार्क राख्न।
युरोपेली इक्विटीले प्रस्ताव गरेको प्रस्ताव उत्तर अमेरिकी भन्दा शक्तिशाली छैन। तर पनि, यसले तपाईंलाई पर्याप्त प्रस्ताव प्रस्ताव गर्दछ कि तपाईं एक धेरै विविध लगानी विकास गर्न सक्नुहुन्छ। केहि देशहरूसँग जुन अरूसँग विस्तृत मोडेलहरू छन्। उद्देश्यका साथ कि तपाईं आफ्नो वित्तीय बजारमा सूचीबद्ध भएका कुनै पनि धितोमा तपाईंको सम्पत्ति लगानी गर्न सक्नुहुनेछ।
1 टेक्नोलोजीहरू: तिनीहरू कहाँ सूचीबद्ध छन्?
2 यी कम्पनीहरू कसरी छन्?
3 अर्को विकल्प: अ :्ग्रेजी झोला
4 अनि स्पेनमा के हुन्छ?
5 टेक्नोलोजी सूचकांकको पृष्ठभूमि
6 यस क्षेत्रका साथ अपरेटिंगका लागि सुझावहरू
टेक्नोलोजीहरू: तिनीहरू कहाँ सूचीबद्ध छन्?
सबै भन्दा पहिले, तपाइँले नयाँ पैसा टेक्नोलोजी क्षेत्रमा पोष्ट खोल्ने चाहना पूरा गर्न चाहानुहुन्छ भने तपाइँको पैसाको गन्तव्य के हो भनेर पत्ता लगाउनुपर्नेछ। तपाईं धेरै हुनेछ विकल्पहरू, जुन धेरै उपयोगी हुन सक्दछ जब यसको प्रवृत्ति स्पष्ट रूपमा माथि देखिन्छ। यस व्यवसाय गतिविधि भित्र धेरै विविध क्षेत्रहरुबाट कम्पनीहरू मा स्थिति लिन। तपाईलाई केवल यो जान्नुपर्नेछ कि यी मानहरूको सब भन्दा प्रतिनिधि सूचकहरू कुन हुन्।
ठिक छ, तपाईंलाई थाहा हुनुपर्दछ कि युरोपमा तथाकथित नयाँ मार्केट इन्डेक्स छ जसले जर्मनी, फ्रान्स, बेल्जियम, हल्याण्ड र इटाली जस्ता राष्ट्रहरूको प्राविधिक क्षेत्रहरूलाई समेट्छ। तिनीहरू समूहमा सूचीबद्ध छन् र तपाईंलाई यस मांगलाई सन्तुष्ट पार्ने अवसर प्रदान गर्दछ जुन तपाईंसँग अहिले छ। यो एक सूचकांक हो जुन यस शताब्दीको सुरूमा लगानीकर्ताहरूको मागको प्रतिक्रियामा सिर्जना गरिएको थियो।
महाद्वीपमा सबै भन्दा महत्वपूर्ण कम्पनीहरूको प्रतिनिधित्व हुन्छ। यद्यपि तपाइँको प्रस्ताव अत्यधिक शक्तिशाली छैन, क्षणको लागि। यदि तपाईं स्थिति खोल्न चाहनुहुन्छ भने तपाईं आफ्नो सामान्य बैंकबाट शान्तपूर्वक आन्दोलनहरू प्रदर्शन गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। अचम्म मान्नुपर्दैन, हाम्रो देशका सबै संस्थाहरू इक्विटीमा यस विकल्पको लागि खुला छन्। तिनीहरू एक मात्र फरक हो कि तपाईंले राष्ट्रिय बजार शेयर एक्सचेन्जमा चलाउनु भन्दा केही अधिक विस्तृत आयोगहरू मान्नुपर्नेछ।
यी कम्पनीहरू कसरी छन्?
तपाईं नयाँ टेक्नोलोजी एकीकृत गर्ने सबै व्यवसायहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने कम्पनीहरूमा आउनुहुनेछ। इलेक्ट्रोनिक वाणिज्य, कम्प्युटरहरू, प्रोसेसरहरू, सामाजिक नेटवर्कहरू वा ईन्टरनेट सबै भन्दा राम्रो चिनिएको बीचमा। यी प्रस्तावहरूको एक राम्रो हिस्सा तपाईंलाई थाहा छैन किनकी तपाईंले तिनीहरूलाई कहिले सुन्नु भएको छैन। जबकि अरू तपाईलाई पहिचान गर्न सजिलो हुनेछ। तिनीहरू भूगोल भर पनि व्यापार गरिन्छ।
केही प्रस्तावहरूमा तिनीहरू केही हदसम्म एटिपिकल तरीकाले सूचीबद्ध छन्। परम्परागत मानहरू जस्ता होइन, तर ती अपेक्षाहरूमा आधारित जुन तपाईंको व्यापार लाइनहरू उत्पन्न गर्दछ। यो यो विशेषता को कारण हो कि यसको अस्थिरता चरम छ। तपाइँ एक दिन तपाइँको मूल्य १०% सम्म बढाउन सक्नुहुन्छ, र त्यस्तै प्रतिशत छोड्नुहोस्। अचम्मको कुरा होइन, नयाँ टेक्नोलोजी क्षेत्रको मानहरू यसैले कसरी सार्दछन्। यूरोपियन महाद्वीपमा मात्र होइन, तर विश्वभर।
तिनीहरूले आफ्नो मूल्यहरु मा धेरै स्पष्ट मतभेद प्रस्तुत गर्दछ। तिनीहरू समान ट्रेडिंग सेसनमा १०% सम्म पुग्न सक्दछन्, वा इक्विटीको लाइभस्टेस्ट सेशनहरूमा पनि बढ्छ। तपाईका लागि इंट्राडे अपरेशनहरू गर्नका लागि यो धेरै सजिलो हुनेछ, जुन त्यहि दिनमा हो। निश्चित रूपमा किनभने यो तिनीहरूको मूल्यहरुमा फरक पर्दछ। युरोपेली शेयर बजारमा अन्य मानहरूले प्रस्तुत गरेको भन्दा माथि।
अर्को विकल्प: अ :्ग्रेजी झोला
यदि तपाईं प्राविधिक स्टकहरूमा पोष्ट खोल्न महाद्वीप छोड्न चाहनुहुन्न भने, तपाईंसँग औसत लगानीकर्ताको रूपमा तपाईंको रूचिहरूको लागि अर्को धेरै शक्तिशाली विकल्प छ। टेक्नोमार्क मार्फत, अंग्रेजी शेयर बजारको अनुक्रमणिका जसले यस वर्गका कम्पनीहरूको समूह बनाउँछ। यस बर्षमा यसले समान सुविधाहरूको साथ अन्य सूचकांकहरूको तुलनामा उच्च प्रतिफल कायम गर्दछ। करीव १०% को प्रशंसाको साथ, नस्दाक १०० ले प्रस्ताव गरेको भन्दा बढी, जसले केवल 10% मात्र सराहना गर्छ।
लगानी को यस परिप्रेक्ष्य बाट यो तपाइँको चासो को लागी एक धेरै चाखलाग्दो विकल्प हुन सक्छ। जे होस् दुई नकारात्मक बिन्दुको साथ यो जान्न तपाईंलाई सुविधा मिल्छ कि अर्को महिनाहरूमा तपाईले स्थिति खोल्दै हुनुहुन्छ भने। एकातिर, अपरेशनहरू बेलायती पाउन्डमा हुनेछ र यूरोमा होइन। यो घटना यसको व्यवस्थापन मा अधिक खर्च मतलब हुनेछ। तपाई यस युरोपेली इक्विटी बजारमा सब भन्दा बढी शुल्कमा सम्मिलित हुनुहुनेछ।
दोस्रो कमजोरी भनेको बेलायतले हालसालै सामुदायिक संस्थाहरूलाई त्याग्नु हो। यसले तपाईका मानहरूको प्रतिक्रियालाई आउँदो वर्ष देखि सकारात्मक बनाउनको लागि बनाउन सक्छ। विशेष गरी नयाँ टेक्नोलोजी जस्ता यी आर्थिक परिवर्तनहरूप्रति संवेदनशील क्षेत्र। यदि तपाईं ब्रिटिश बजारमा स्थिति खोज्न चाहानुहुन्छ भने तपाईं यो परिदृश्यलाई भुल्न सक्नुहुन्न।
अनि स्पेनमा के हुन्छ?
दुर्भाग्यवस, हाम्रो देश ती मध्ये एक हो जसले यी मूल्यहरूको प्रतिनिधित्व शेयर बजार अनुक्रमणिका प्रस्तुत गर्दैन। अचम्मको कुरा होइन, कम्पनीहरूले यसलाई एक्लै जान्छन्। थप रूपमा, त्यहाँ एक शक्तिशाली र व्यापक प्रस्ताव छैन, बिल्कुल विपरीत। इन्द्र मात्र एक कम्पनी हो जसको राष्ट्रिय शेयर बजारको छनौट सूचकांक Ibex 35 XNUMX मा महत्वपूर्ण वजन छ।
यस दुर्लभ उपस्थितिको परिणामको रूपमा, तपाईंसँग नयाँ टेक्नोलोजीहरूको मानहरू मार्फत सेयर खरीद गर्न सेकेन्डरी बजारमा जानुबाहेक अरू कुनै विकल्प हुनेछैन। तर अर्को घटना संग। यो बाहेक अरू केहि छैन जुन उनीहरू थोरै व्यवसायिक समेकनको साथ कम्पनीहरू हुन् र जसको लेखा ले ठूला लगानीकर्ताहरुलाई धेरै शंका प्रदान गर्दछ। थप रूपमा, तिनीहरूको मूल्यको उतार चढाव अत्यन्त उच्च छ। कुनै पनि साना लगानीकर्ताको लागि अप्राप्याप्त स्तरहरू सम्म जुन यो तपाईंको मामलामा छ।
यी धेरै सानो पूंजीकरण कम्पनीहरू हुन् जो धेरै तरल छैनन्। अचम्मको कुरा होइन, तिनीहरू हरेक दिन धेरै थोरै शीर्षकहरू सर्छन्। कहिलेकाँही म साँच्चिकै हास्यास्पद प्रतिशत पाउँछु। त्यो जे भए पनि, ती मूल्यहरू छोड्न र प्रवेश गर्नबाट रोक्छ तपाईको मूल्यमा। उत्तम अवस्थामा तपाईले बजार मूल्यमा अपरेशन्स औपचारिक बनाउनु पर्नेछ। इक्विटी बजारमा तपाईंको कार्यहरू अनुकूलन गर्न एक बाधा। वास्तविक जोखिमको साथ यसले तपाईंलाई केहि दिनमा धेरै यूरो गुमाउन सक्छ।
टेक्नोलोजी सूचकांकको पृष्ठभूमि
जे भए पनि तपाईलाई यो जान्न सजिलो हुन्छ कि केहि वर्ष अघि राष्ट्रिय शेयर बजारमा एउटा नयाँ बजार रहेको थियो। विशेष गरी s ० को दशकको अन्तमा। जहाँ यस क्षेत्रको च्याम्पियनहरू प्रतिनिधित्व गरिएको थियो। टेरा, TPI, Tecnocom वा Zeltia यसको सदस्यहरू हुन्। तर यो अनुक्रमणिका अलि कम विशिष्ट वजनको कारण हरायो जुन यी सेकुरिटीहरूले सामान्यतया स्पेनी इक्विटीमा राखेका थिए। Dot.com बूमको परिणाम स्वरूप सामयिक घोटालाको साथ पनि।
यस क्षण पछि, यी प्रतिभूतिहरू स्वत: स्वतन्त्र रूपमा ट्रेड भएका छन्, प्रत्येक आफ्नै लागि। यद्यपि नेशनल सिक्युरिटीज मार्केट कमिशन (CNMV) ले संकेत गरिरहेको छ कि स्पेनी कम्पनीको सबै प्राविधिक मानहरूलाई समेट्ने क्रममा फेरि एक इन्डेक्स सिर्जना हुन सक्ने सम्भावना छ। यद्यपि यो मिति कहिले लगानीकर्ताहरुका लागी कार्यान्वयन हुने बारे परिभाषित गरिएको छैन।
जे भए पनि, यदि तपाइँले यस मांगलाई पूरा गर्न राष्ट्रिय इक्विटीमा प्रवेश गर्न चाहानुहुन्छ भने, यो साँच्चिकै हो कि तपाइँलाई त्यसो गर्न धेरै समस्या हुनेछ। तपाईंसँग शेयर विकल्प किन्न र बेच्न तपाईंको वातावरणको अन्य बजारहरूमा जानु बाहेक अरू विकल्प छैन। किनकि राष्ट्रिय आपूर्ति सम्पूर्ण महादेशमा गरिबहरू मध्ये एक हो। विश्व दृश्य मा केहि प्रासंगिकताको प्रस्ताव को एक जोडी को साथ।
यस क्षेत्रका साथ अपरेटिंगका लागि सुझावहरू
तपाईंको सफलताको अधिक ग्यारेन्टीको साथ तपाईंको अपरेशनहरू च्यानल गर्नको लागि, तपाईंले दिशानिर्देशहरूको एक श्रृंखला लागू गर्नुपर्नेछ जुन सबै प्रकारका परिस्थिति र रुझानहरूमा उपयोगी हुन्छ। ती निम्न हुन् जुन हामी तपाईंलाई तल प्रस्ट गर्दछौं।
यदि तपाईं आफूलाई नयाँ टेक्नोलोजीमा पूर्ण रूपमा समर्पित गर्न चाहानुहुन्छ भने तपाईंसँग अहिलेको उत्तम विकल्प भनेको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय बजारहरू मार्फत शेयर बजारमा आन्दोलनहरू गर्नु हो।
यो एक खण्ड हो जुन धेरै जोखिमहरू बोक्छ, र जहाँ यो सुविधाजनक हुँदैन कि तपाईं सबै बचतहरू छुट्याउनुहोस्, तर तिनीहरू मध्ये केही अंश मात्र। वा अन्य लगानीहरूको लागि पूरक।
तपाइँले बनाउने धितोहरूको चयनसँग तपाइँ धेरै सावधान हुनुपर्दछ, किनभने यस्तो हुन सक्दछ कि ती मध्ये कतिपय धेरै तरल छन् र तपाइँले चाहेको सटीक समयमा बजार छोड्नबाट रोक्दछन्।
तपाईंले दिमागमा राख्नु हुनेछ कि ती नयाँ प्रविधिहरूको सबै मूल्यहरू हुन्, तिनीहरू धेरै फरक व्यवसाय क्षेत्रहरूबाट आएका छन्। यो सुविधाजनक हुनेछ कि तपाइँ आफैंलाई पोजीसन खोल्नु अघि उनीहरूलाई सूचित गर्नुहोस्।
लगानीको समयमा, तपाईंले दिमागमा राख्नु पर्छ कि यी प्रस्तावहरूले विस्तारको परिदृश्यमा परम्परागत मानहरू भन्दा राम्रो काम गर्दछन्, तर अव्यवस्थित व्यक्तिहरूमा वा गिरावट भइरहेको स्टक बजारहरूको साथमा खराब।
तपाईंसँग अर्को निश्चित रूपमा लगानी बनाउन मूल तरीका छ जुन यी वित्तीय सम्पत्तिमा आधारित कोषहरूको माध्यमबाट हुन्छ। यो उत्तम तरिका हो तपाईं आफ्नो सम्पत्ति विविधता ल्याउन।
पछाडि हतार गर्ने प्रयास नगर्नुहोस् किनकि यी मानहरू हुन् जुन ठूलो आवृत्तिको साथ अस्थिर हुन्छन्, धेरै कट्टरपन्थी आन्दोलनको साथ पनि तपाईको पोर्टफोलियोमा सम्भावित फाइदा बिगार्न सक्छ। तपाईको रुचिको लागि धेरै खतरनाक स्तरहरू सम्म जुन तपाइँ अनुमान गर्न पनि सक्षम नहुन सक्नुहुन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: अर्थव्यवस्था वित्त » वित्तीय उत्पादनहरू » बोल्सा » यूरोपमा नयाँ प्रविधिहरूको लागि बजारमा लगानी गर्नुहोस्
दोस्रो घर मा लगानी
अधिक भुक्तानी स collect्कलन गर्न कहिले सजिलो हुन्छ?